Bakhala ngokungaphephi kwabafundi kwaNyanda Primary | News24
Bakhala ngokungaphephi kwabafundi kwaNyanda Primary
ISITHOMBE: sithunyelwe Abafundi bakwaNyanda Primary School bewela umgwaqo okuthiwa usubaqedile abafundi beshayiswa izimoto.
BAKHALA ngokungaphephi kwabafundi othisha bakwa Nyanda Primary School eSweetwaters emva kokuba izingozi zezimoto ngaphandle kwale sikole seziphenduke insakavukela umchilo wesidwaba.
Lesi sikole esisukela kuGrade R kuya kuGrade 4, kuthiwa kulo nyaka sezingaphezu kwezine izigameko zokushayiswa kwabafundi izimoto.
Uthishanhloko walesi kole uNkk Zandile Sibisi uthe isigameko sangesonto eledlule lapho abafundi ababili beshayiswe imoto ngosuku olulodwa, kwenze babona njengothisha ukuthi impilo yabafundi isengcupheni.
Uqhube wathi inkinga yezingozi into endala kulesi sikole njengoba ngaphambilini beke bathintana noMnyango wezokuThutha ogcine ngokubafakela izithiba jubane (speed humps), athe azanele.
“Emasontweni amathathu edlule kunomfundi owashayiswa imoto ezama ukuwela umgwaqo, ngenhlanhla washeshe waphuthunyiswa esibhedlela.
“Sithe sisababaza lokho, ngesonto eledlule kunomunye umfundi owashayiswa imoto ezama ukweqa umgwaqo esebuyela ekhaya ntambama. Ngalo lolo suku kunomunye owagejwa iloli ezama ukweqa naye.
“ Lezi zigameko zizodwa zikhombisa ukuthi abafundi abaphephile. Yize sinaye umuntu esimqashe thina njengesikole ukuthi abawelise, uma beke badlula esandleni sakhe, basuke sebebodwa.
“Bancane laba ntwana, okwenza nokuthi bahluleke nokubaleka uma bebona ingozi. Phezu kwezithiba jubane ezikhona, siyafisa sengathi singafakelwa izebra crossing, ezophoqa ukuthi zonke izimoto zime ukuze kudedelwe labo abahamba ngezinyawo.
“Siyafisa futhi ukuthi sithole nezimpawu zomgwaqo ezizoqwashisa izimoto zisekude ukuthi zehlise ijubane Ingozi eyodwa yanele, asifisi ukuthi ngelinye ilanga kuze kuphume imiphefumulo,” kusho uSibisi.
Ikhansela lakwa ward 3 uMnu Linda Madlala uthe uyazi ngalolu daba, futhi ucebise isikole ukuba sibhalele umasipala incwadi ozobe usuxhumana noMnyango wezokuThutha.
“Okudingeka kakhulu imibhalo ezoqwashisa abashayeli bezimoto ukuthi kunezingane zesikole eziwela umgwaqo, njengoba evele ekhona umuntu oziweliseyo,” kusho yena